Niwu Yookitti Haleellaa Gocha Shororkeessaati Jedhameen Lubbun Namootaa Darbe
Sadaasaa 02, 2017
Sayfullo Saipov New York Attack
Qondaalonni Niwu Yoork, nama magaalaattii keessatti kaleessa konkolaataa fe’isaa kireeffame karaa namoonnii fi biskileetiin itti heddummaatetti oofuudhaan namoota hedduu galaafate qorachuu jalqabanii jiran.
Eega Fulbaana 11, bara 2001 haleellaan xayyaarota lamaan gamoolee Waaltaa Daldala Addunyaa lama irratti geggeessamee lubbuu dhibba hedduu fixee as, haleellaa shororkeessummaa magaalaa Niw York keessatti yoo xiqqaate namoota 8 galaafate kana duuba kaka’insi maalii akka jiru adda-vbaafachuutti fuuleffate – qorannaan geggeessamu kun.
Namni haleellaa kaleessaa kana geggeesse – jedhame – Sayfulloo Saypoov, bara 2010, Uzbeek irraa gara Yunaayitid Iasteets-tti ka godaane yoo tahu, fuula Meediyaa hawaasummaa qabiyyee garee shorrokeessummaa “Islamic Isteet” qabutti hidhata qabaachuu isaa dubbatu – Qondaalonni qorannaa.
Barreeffamni bakka haleellaan itti geggeessame sanatti argame – garee Jihaadii sanaaf kan bulu tahuu isaa kan inni ittin dhugeesse of keessaa qabaachuu isaas maddeen oduu gabaasanii jiran. Kaleessa, poolsii magaalaa Niwu Yoorkiin garaa isaa irra haleelamee kan qabame – Saypoov, amma lubbuun hafee wal’aansi baqaqsanii hodhuu godhameefii jira.
Bulchaan magaalaa Niw York – Biil Dibilaasiyoo akka jedhanitti, haleellaan kaleessa magaalaa isaanii keessatti Sayfulloo Sayppoviin geggeessame yoo xiqqaate namoota saddeet ajjeesee, 11 madeesse.
Magaala Niiw Yoork Keessatti Namoonni Vaayrasii Haaraan Qabaman 5 Argaman